Iikhosi-iZiko leMfundo ngeelwimi ezimbini
F1 Izixhobo zabafundi
Ikhaya IsiNgesi sababaleki, ii-asylees, i-SIV, kunye namaxhoba okurhweba ngabantu ngokungekho mthethweniiikhosi
Iikhosi zeeLwimi zoLwimi lwesiNgesi
IsiNgesi njengeLwimi lwesiBini
Iiklasi ze-ESL zigxila kwizakhono zolwimi ezisindileyo. Iiklasi zethu zifundisa izakhono eziphambili zolwimi zokuthetha, ukumamela, ukufunda nokubhala. Sineeklasi zesiNgesi zawo onke amanqanaba ukusuka kwangaphambi kokuqala ukuya phambili.
Iziseko zoLwazi lokuFunda nokuBhala
Le khosi yenzelwe abafundi abanolwazi oluncinci okanye abangenalo kwaphela ulwazi lwesiNgesi. Abafundi baya kufunda ialfabhethi, ukuqaphela inani, amagama okubona kunye nezandi.
Kubafundi abaneeshedyuli ezingaqhelekanga okanye abahlala kude, i-BEI ineeklasi zokuzenzela ezenzelwe abafundi ukuba bafunde isiNgesi naphi na nangaliphi na ixesha. Iiklasi zibonelelwa ngentsebenziswano yethu neBurlington English.
Iiklasi zesiNgesi ezifundiswa ngendlela yeHybrid zinika ukufundwa zombini kwiiklasi ezikwi-intanethi nasebusweni. Le khosi ilungile kubafundi abakhetha zozibini iimfundiso zokuzifundela kunye nokuziqhelanisa nomyaleli kunye nabanye abafundi.
Ukuqeqeshwa ngamaqela amancinci
Le khosi ilungele amaqela amancinci aneenjongo ezifanayo zokufunda ulwimi kwaye kufuneka asebenze kwiinjongo ezithile zolwimi.
I-BEI ibonelela ngemiyalelo yabucala yomfundi onesakhono esilinganiselweyo enokwenza ukuba kube nzima ukuthatha inxaxheba kwiklasi yeqela. Izakhono ezinqongopheleyo zinokubandakanya, kodwa kungaphelelanga kumbono ophantsi, ukungaboni kakuhle, nemicimbi yokuhamba.
IsiNgesi kwiikhosi zeNjongo eziZodwa
IZakhono zoBomi isiNgesi
Ezi zifundo zazisa imbaleki esandula ukufika kwimisebenzi yoluntu lwaseMelika. Abafundi baya kuqhelana namacandelo ahlukeneyo oluntu lwethu lwasekhaya kunye nesiNgesi kufuneka siphumelele. Imixholo yezifundo ezidumileyo ibandakanya ukuFunda nokuBhala ngezeMali, uLwazi loKhathalelo lwezeMpilo, kunye nokuqonda inkqubo ye-US Education.
Ezi zifundo zibonelela ngezakhono zesiNgesi kumashishini athile emisebenzi. Abafundi kwezi zifundo banokuba namava angaphambili kwezo ntsimi okanye banomdla wokungena kuloo ndawo yomsebenzi. Imixholo yezifundo ezidumileyo ibandakanya i-Medical English, isiNgesi seTekhnoloji yoLwazi, kunye nesiNgesi sabaGcisa.
Le khosi ilungiselelwe abaqashi abanabemi ababalulekileyo abaziimbacu. Iiklasi zihlala zisemsebenzini kwaye zidibanisa izakhono ezisisiseko zokusinda zesiNgesi kunye nesigama esithile esinxulumene nesigama kunye namabinzana.
Izidingo ezithile zoluntu lweembaleki lwaseHouston lunokugqiba ukuba iiklasi zesiNgesi zeenjongo ezithile ziyafuneka ukukhuthaza ukuzithemba kunye nokuzanelisa kwiindawo ezinje ngeNgxoxo, ukuBhala, njl.
Iziko lezeLwimi eziBini
Ngama-6060 eRichmond Avenue,
Ileta yo kwamkelwa
Ukuqinisekiswa kunye nokuba lilungu
Iindaba kunye noHlaziyo
UkuCima kunye noMgaqo-nkqubo weMbuyekezo
© Ilungelo lokushicilela 2021 iZiko leMfundo leelwimi ezimbini